Isiqinisekiso se-PMP - Izizathu ze-10 zokuthola isitifiketi se-PMP - ITS Tech School
I-PMP Certification - Izizathu ze-10 zokuthola isitifiketi se-PMP
Izizathu ze-10 zokwenza isitifiketi se-PMP
Indlela ukuqeqeshwa kwe-PMP isitifiketi kuyasiza
PMP kanye Nemisebenzi Yomsebenzi
Abaphathi be-PMP bakholelwa Ukuba Namakhono Aphakeme
Isitifiketi se-PMP siphuthumayo
Isitifiketi se-PMP Senza Ukubuyela Kwakho Kukhange Kakhulu.
Ukwandisa Umsebenzi Wokuphatha Kudinga i-PMP Certification
Kuthuthukiswe njengomphathi wezinyathelo
Uzoba umuntu ovela eceleni phakathi kwemihlangano yobuchwepheshe ehlonishwa kakhulu
Ukugunyazwa kweProjekthi Management Professional (PMP) ukuma phakathi kwezitifiketi ezibalulekile kakhulu zomkhakha. Kubonakala konke okubandakanya futhi kubonisa ukuthi unolwazi, unolwazi futhi uqeqeshiwe emkhakheni wokuphathwa kwezebhizinisi. Ngomgomo wokuphela othize wokusebenzisa udinga idireji yonyaka omine (i-Bachelor degree noma i-global efanayo) futhi engaphansi kweminyaka emithathu yokuhlangana kwezokuxhumana. Wena ngokwengeziwe udinga okungaphansi kwehora le-4500 lokushayela nokuhlela imisebenzi eceleni kwamahora we-35 weProject Management Education. Kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka ukuthi awunayo i-Bachelor degree, ungasebenzisa noma kunjalo.
Uma kwenzeka unesiqiniseko esisizayo (esikoleni samabanga aphansi noma efana nomhlaba wonke) futhi ungenayo iminyaka engaphansi kweminyaka emihlanu yokuhlangana kwezokuphatha ngokuhambisana namahora we-7500 wokuxhumanisa nokushayela imisebenzi namahora we-35 wokufundisa ukuqhuba imisebenzi, ungahambisa futhi.
Isilinganiso se-PMP sinengqondo. Ngenye yezimvume zokuqala ze-10 emhlabeni. Isitifiketi se-PMP siyabonakala kakhulu esiphambene namabhizinisi. Izinhlangano eziningi ziye zenza ukuthi kudingeke ukuba ama-PM afeze isitifiketi se-PMP noma se-proportionate. Ngethuba lokuthi awunalo lesi sitifiketi ngakho awucatshangelwa ukuthi isabelo se-PM (Imenenja yeProjekthi). Lokhu kunganciphisa umsebenzi wakho kusengaphambili. Okunye ukuphefumulelwa ukwenza PMP kuyinxephezelo. Ngokwe-Salary Survey ye-PMI ukukhishwa kwesishiyagalolunye, labo abanesitifiketi se-PMP babuthana isinxephezelo esiphezulu (20% ephakeme ngokubanzi) kunalabo abangenazo lezi ziqinisekiso.
Ukuba nesitifiketi kuzokwenza kube lula kakhulu ukuthola umsebenzi njengenhlelo noma uMphathi Wephrojekthi. Ubukhulu be-PMP buhle kakhulu. Kuyizungeze isitifiketi esidumile esidumile. Njengama-overviews ahlukene, kungenye yezingqinamba ezinkulu ze-10 emhlabeni.
Ngenkathi lokhu kucela ukuba kube iphuzu elingalungile, ukwandisa abaphathi ngokuqeqeshwa kwe-PMP isitifiketi ngokuvamile kuvunyelwe ukuba nelungiselelo elihambelanayo lamakhono okubaluleka okuqinisekisa ukufezwa kwebhizinisi.
Ukwandisa I-Certification Professional Professional emhlabeni wonke kanye. Kunezinyathelo eziningi ezidinga izinduna eziye zahlangabezana nokuqeqeshwa kwe-PMP. Ingxenye yemidwebo yinkampani enobungozi, ukwakha amandla, amafutha kanye negesi, amabhizinisi, ukuthuthukiswa, ukuhamba kanye nobunjiniyela. Ngesitifiketi se-PMP, ungahola iphakethe.
Uma kwenzeka ucinga umsebenzi njengomqondisi wezinhlelo-noma usesezingeni eliphansi kakhulu ekusebenziseni ukuphathwa kwe-venture-isitifiketi seProjekthi Management Professional yisitifiketi esingavamile sokwengeza ku-resume yakho.
Ukuvuleka kwemisebenzi emikhulu, izinhlangano eziningi kanye nemisebenzi inesidingo sokuphoqelelwa kwe-PMP isitifiketi, ngakho-ke uma kungenzeka ukuthi awusona i-PMP eqinisekisiwe, awukwazi ukuqhubekela phambili, kungakhathaliseki ukuthi uneminyaka engakanani yokuhlangenwe nakho kwakho. Kunezimo ezingeziwe zokuthuthuka ngaphakathi kobudlelwane bakho njengoba kusiza ekusebenziseni okuthuthukisiwe, ngakho-ke inhlangano nayo iyazuza.
Njengokwengqungquthela yeSabelo Sokuphathwa Kwephrojekthi ye-PMI, abanikezeli be-qualification ye-Project Management Professional (PMP) e-US bathola okujwayelekile kwe-22% ngaphezu kweontanga zabo ezingabonakali ku-2015.
Akungabazeki ukuthi ubeke imithombo ku-PMP uma kwenzeka usalindelekile ukuthi usebenze emkhakheni wokuphathwa kwezebhizinisi nganoma yini esele ishiywe empilweni yakho. Lokhu akugcini nje ukubonisa ukuzibophezela kwakho futhi uhlose ukugcina isikhundla sakho esikhathini esikude ngokwengeziwe kusiza ukuthi ufunde izilinganiso ezingeni elizimele ezibalulekile kule nsimu.
Ikusiza ekuthuthukiseni umphathi wesifundazwe osebenza kahle. Ngokuhamba kwesikhathi, ngemuva kokuqedela lesi sitifiketi, uthatha ulwazi mayelana namadivayisi namasu okwenza ukuthuthukisa kwakho kube nokuningi. Lokhu ekugcineni kwakha isithunzi sakho enhlanganweni. Uzoba nethuba lokusebenzisana kanye nezinhlelo zokuphatha namanye ochwepheshe bokuphatha abasebenza emhlabeni jikelele, okungazakhela kahle amathuba akho okuphumelela kobuchwepheshe nokuthuthukiswa.
Ngokufeza isitifiketi se-PMP, igama lakho lizofakwa embuthanweni omkhulu kakhulu futhi ohlonishwa kakhulu oqinisekisiwe we-Project Management Experts.
Ngethuba elihle lokuthi ube nethemba lokwenza ushintsho lwamagama, ukugunyazwa kwe-PMP kungakusiza. Ngokuthatha i-accreditation lapho ungadinga khona iminyaka eminingi, ungaqala lapho ufaka khona ngesimo esiphakeme futhi ukhokhe kunokuba ungase ukwazi ukukwenza. I-PMP isitifiketi ngeke ibe yinto engenzi lutho kakhulu ozoyenza emisebenzini yakho kodwa izokukhuthaza.
Ukufunda i-PMP kuqondile ngokuqondile futhi kusize ITS. Ifundisa izindlela zokudala zomsebenzi futhi ivumela amalungu ukuba athole ukufunda kusukela ekubhekeni komhlaba kuze kube seminye imikhakha ehlukahlukene.